Thunderbird abịarute! Featuresfọdụ atụmatụ na-egbu egbu, ndị ọzọ kwesịrị igbu! | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 19, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
N'abalị ikpeazụ m buuru Mozilla Thunderbird iji nwalee ya. Thunderbird bụ Firefox si nwanne nna… the Email Client. Ozugbo m ibudatara otu isiokwu ma ọ bụ abụọ wee gbanwee ihe niile masịrị m, enwere m ya nke ọma. Ọ bụ ezigbo onye ahịa email, yana atụmatụ ndị ọzọ nke mwekota na mkpado Gmail.
Nkpado bụ ikike ịhapụ ụfọdụ mkpụrụokwu ị mebere ma kenye ha ihe ọ bụla, na nke a email. Nke a ga - enyere gị aka ịchọ ihe dị mfe site na mkpado ị kenyere. Nice mma… nkpado bụ ihe anyị na-ahụ ọtụtụ ụbọchị ndị a na Internetntanetị (M hụrụ n'anya iji Del.icio.us nkpado nke URL).
E nwere otu atụmatụ m hụrụ na Thunderbird na nnọọ mere m crazy, ezie… nkewa ubi mgbe importing m Akwụkwọ Adreesị. The interface bụ na-abaghị uru na-akụda mmụọ na-enweghị ọgwụgwụ.
Iji maapụ a n'ọhịa, ị họrọ ubi si gị faịlụ na-akpali ya elu ma ọ bụ ala ka mmezi ya na ubi na Thunderbird. Nanị nsogbu bụ mgbe ị na-akwagharị ubi gị elu ma ọ bụ ala, ọ na-emegharị mpaghara ahụ dị na mbụ ebe ahụ na-abụghị ụzọ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-emepụtakwa ala n'ubi m. Amachaghị m onye chebere atụmatụ a mana ọ bụ ihe nzuzu. Ha kwesiri inwe igbe di iche na ubi Thunderbird n'ime ha. Ka ị na-ahọrọ mpaghara ọ bụla site na faịlụ isi gị, ị ga-enwe ike ịhọrọ ubi Thunderbird iji depụta ya.
Thunderbird, biko KWU egwu a dị egwu. Emechara m daa na mbubata mpaghara m niile wee webata aha na adreesị ozi-e. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa nchekwa data yana ahụmịhe nchekwa data nke ụlọ ọrụ enweghị ike ịse mpaghara, ana m eche na mmadụ ole na ole ndị ọzọ na-achọta nke a dị mfe iji. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ka ndị ahịa nabata onye na - eme email gị, ị ga - ahụrịrị na ha nwere ike ibugharị akwụkwọ adreesị ha site n’otu onye ahịa gaa na nke ọzọ. Nke a agaghị ekwe omume.
Nwere ike a Guy Mee a WordPress Okwu ma ọ bụ Gịnị?!
Apr 19, 2007 na 6: 48 PM
A big whoop-dee-doo 🙂 M na-agbalị TB niile ọ bụ nke interations na mgbe hụrụ ya ihe bara uru n'ịnọgide na; mana abughi m onye FF.
Mgbe m gụrụ na ha ga-agbakwunye ịkpado Njirimara m nwere olile anya dị elu dịka nke a bụ ihe m nwetagoro iji akara nri FeedDemon na Teknụzụ. Otú ọ dị ihe TB na-akpọ mkpado abụghị ihe karịrị ntakịrị mgbanwe nke ọkọlọtọ ọkọlọtọ ma ọ bụ ụfọdụ usoro dị otú ahụ.
Ọ bụrụ na emejuputara ezi echiche nke nkpado mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịme ha ka ha mepụta dị ka folda sub na / ma ọ bụ jikọtara ya na obere folda emepụtara enwere ike jikọta ya na usoro iwu.
nke ahụ apụtaghị na m na-eji nsụgharị MS kachasị ọhụrụ. Achọtara m nhọrọ m na-emefu $ 20.00 maka InScribe (ụdị Linux yana mgbakwunye ọdụ ụgbọ mmiri na-abịanụ) na elebeghị m anya kemgbe.
Apr 19, 2007 na 7: 14 PM
Abụ m nnukwu onye ofufe FF. Ọ bụrụ na ịmee mmemme weebụ ọ bụla, FF dị mma. Ihe mgbakwunye maka Firebug na Live HTTP Headers enweghị ọnụ ahịa ma nyere m aka ị nweta otu tọn. Naanị m jikọtara ihe mgbakwunye ọhụrụ nke na-enye m ohere ịmegharị saịtị m na CSS nke m… ọ bụ ọtụtụ ihe ọchị.
Nye Firefox ohere! Enwere m ike ịnara ma ọ bụ hapụ Thunderbird, n'agbanyeghị. Aga m agba ọsọ ya ruo nwa oge, m ga-emeghachi azụ ma ọ bụrụ na ahụrụ m ndị ọzọ dị mma.
Apr 19, 2007 na 10: 11 PM
Doug .. Agbalịrị m FF ọtụtụ oge. Enwere m ya arụnyere mana enweghị m mmasị na ya. M na-ejikọ ya na-agba ya ọkụ ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ karịa ijide n'aka na ọ bụ oge.
Anaghị m ekwu na IE7 ka mma ma ọ bụ ka njọ mana ọ bụ isi ihe nchọgharị m na-ahọrọ.
Apr 19, 2007 na 10: 13 PM
Enweghị ụzọ mgbapụ na Borg, Steven. Ga-assimilated mee elu mee. 😉